Burundi: Arday mudaaharaaday - BBC Somali
Burundi: Arday mudaaharaaday
1 Maajo 2015
Image caption Ardayda jaamacada oo hortaagan safaaradda US
Boqolaal arday ah, ayaa dalka Burundi xalay ku baryay iridka hore ee safaarada Maraykanka kaddib markii jaamacadooda la xiray si looga hortago dibadbaxyo ka dhan dowladda.
Waxay BBC u sheegeen in sababta ay u tageen safaaradda ay tahay in aysan caasimada Bujumbura ku heleynin amni.
Baraha bulshada ayaa la xanibay, waxaa la xiray xarumo raadiyayaal, waxaana la mamnuucay dibadbaxyada.
Dadwaynaha, ayaa dibadbaxayay tan iyo maalintii Axadda iyaga oo ka soo horjeeda go'aanka madaxweyne Pierre Nkurunziza uu ku sheegay in uu isku soo sharaxayo mar sadexaad bisha June.
Dowladda, ayaa xirtay jaamacada khamiistii iyadoo ku sababaysay amni daro laga baqayo.
Image caption Madaxweyne Nkurunziza
Gelinkii hore ee Khamiistii, ayaa boqolaal arday ah waxay isu-soo-bax ka qaban-qaabiyeen bartamaha Bujumbura.
Waxay doonayeen in ay ka hortagaan in madaxweynuhu uu si rasmi ah ugu gudbiyo guddiga doorashada qorshihiisa dib isu soo sharixidda.
Ardayda ayaa u sheegay weriyaha BBC-da Maud Jullien oo halkaa jooga in safaaradda Marykanka ay tahay meesha keliya in ay u arkaan in ay ku badbaadayaan, waxayna sheegeen in ay ka baqayaan xoogagga ammaanka.
Weriyaha ayaa ku qiyaastay in ku dhawaad 500 oo arday ah ay hor joogaan bannaanka safaaradda.
Saraakiisha Maraykanka ee safaaradda ayaan jawaab kama bixin ardayda hor tuban safaaradooda.
Tom Malinowski, oo ah diblumaasi sare oo Maraykan ah, ayaa la kulmay Mr Nkurunziza Khamiistii, wuxuuna markaa kaddib sheegay in uu uga digay xaalada Burundi oo khatar sii gali karta.
Wuxuu weriyayaasha u sheegay in qaar ka mid ah tallaabooyinka lagu xiray baraha bulshada iyo idaacadaha in aysan ahayn oo keliya arrin qaldan balse ay dhibaato keeni karto.
Dibadbaxyada, ayaa ah kuwii ugu ballaarnaa ee ka dhaca dalka Burundi tan iyo dagaalkii sokeeye ee soo idlaaday sanadkii 2005-tii.
Image caption dibadbaxayaal
Mr Nkurunziza, oo horay u hoggaamin jiray falaago, ayaa waxa uu ka digay cidii doonaysa in ay dhibaato ay ku sameyso xisbiga talada haya in ay iyaga laftirkooda ay dhibaato raadsanayaan.
Dastuurka dalka u yaalla, ayaa waxa uu dhigayaa in madaxweynaha la dooran karo laba jeer laakiin dadka asxaabta la ah Mr Nkurunziza, ayaa sheegaya in markii koowaad oo jagada madaxweyne uu qabtay aan loo xisaabin sababtana waxa ay ku sheegeen in xilligaa baarlamaanka uu soo doortay.
Aqalka senate-ka Burundi, ayaa shaaciyay in maxkamadda dastuuriga ay eegeyso sharciga loo maray qorshaha madaxweynaha.
Mr Nkurunziza ayaa xilka hayay tan iyo sanadkii 2005-tii, markaas oo aheyd wakhtigii uu dalkaasi si rasmi ah uga dhamaaday dagaalkii sokeeye.
In ka badan 300,000 oo qof ayaa ku dhintay dagaalkaasi, oo u dhaxeeyay qabiilka laga tirada badan yahay ee Tutsiga oo ku badan ciidamada iyo kooxaha falaagada ah ee Hutu-ga, oo ka mid ah xisbiga Mr Nkurunziza ee CNDD-FDD.